ရှန် ဟို င်းသည် အီလက်ထရောနစ် သတင်းအချက်အလက် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို အားပေးအားမြှောက် ပြု သည် - Pandaily
ရှန် ဟို င်းသည် အီလက်ထရောနစ် သတင်းအချက်အလက် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို အားပေးအားမြှောက် ပြု သည်
Dec 31, 2021, 18:09ညနေ 2022/01/06 23:21:31 Pandaily
ကြာသပတေး နေ့တွင် ရှန်ဟိုင်း စီးပွားရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်“၁၄ နှစ် ငါးနှစ် စီမံကိန်း” စာရွက်စာတမ်းမြို့တော် ၏အီလက်ထ ရော နစ် သတင်းအချက်အလက် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရည်ရွယ်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်လုပ်မှု နယ်ပယ်တွင် ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ် များကို အဓိက အဖြစ်ယူ ရန်အဆိုပြုထားသည်။
၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သြဇာလွှမ်းမိုး မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ရှိသော ကမ္ဘာ့ အဆင့် မီ ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်မှု စပျစ်သီးပြွတ် ကို ကန ဦး တည်ဆောက် ရန်မျှော်လင့် ကြောင်း အစီအ စဉ်က အဆိုပြုထားသည်။ ရှန်ဟိုင်း ၏အီလက်ထ ရော နစ် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်း၏ အတိုင်းအတာ သည်ယွမ် ၂. ၂ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄ ၅ ဘီလီယံ) ထက်ကျော်လွန် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ၎င်း အနက် ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် သတင်းအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း မှ ၀ င်ငွေသည် ယွမ် ၁. ၅ ထရီလီယံ ကျော်ရှိသည်။ အခြေခံအားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်း သည် လွတ်လပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိ လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှု စွမ်းရည် များ သိသိသာသာ တိုးတက်လာ လိမ့်မည်။ တရုတ်၏ ကိုယ်စား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်မှု နှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တွင်ပါ ၀ င်ပြီး အတော်လေး ပြည့်စုံသော စက်မှု ဂေဟစနစ် ကိုဖွဲ့စည်း လိမ့်မည်။
ထို့အပြင် နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ ယွမ် ၁၀ ဘီလီယံကျော် ရှိသည့် ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ၃၅ ခု၊ လွတ်လပ်သော ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု စွမ်းရည် ရှိသော ပြည်တွင်း ဆန်းသစ် သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ ၅၀ နှင့် ပြည်တွင်း နည်းပညာ များနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် သတင်းအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ ၃၃၀ ကိုတည်ဆောက် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ထိပ်တန်း နည်းပညာ နယ်ပယ် များ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး ဘုံ အခြေခံ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းရည် များ ကိုမြှင့်တင် ရန်မျှော်လင့် ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Goltec Microelectronics ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်း လျှောက်လွှာOvid
Integrated Circuit များအရ ရှန်ဟိုင်း အစိုးရသည် လွတ်လပ်သော Integrated Circuit Innovation ကိုမြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက် မည်။ အဓိက နည်းပညာ များနှင့် အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ၏သုတေသန ကို အရှိန်မြှင့် ရန်၊ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် ကိုမြှင့်တင် ရန်နှင့် ချစ်ပ် စက်မှုလုပ်ငန်း ကွင်းဆက် တစ်ခုလုံး ကိုမြှင့်တင် ရန်လည်း စီစဉ်ထားသည်။ ဤ အစီအစဉ်သည် အီလက်ထရောနစ် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်း၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ရည်မှန်း ချက်ဖြင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာ၊ ပြည့်စုံသော စက်မှုလုပ်ငန်း ကွင်းဆက် နှင့် ပြည့်စုံသော အထောက်အပံ့ များပါ ၀ င်သည့် ကမ္ဘာ့ အဆင့် မီ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ် စက်မှုလုပ်ငန်း စနစ် ကိုဖွဲ့စည်း ရန်စီစဉ်ထားသည်။
အခြေခံ အထောက်အပံ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အေဂျင်စီ ၏အစီအစဉ် သည် ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး အဓိက နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှုများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ကွင်းဆက် ၏ ညှိနှိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက် မည်။
ကော်မတီသည် & nbsp ကိုမြှင့်တင် ရန်လည်း မျှော်လင့်ရသည်။ အရာ များ၏ အင်တာနက် ၊ စမတ် ကိရိယာ များနှင့် ကိရိယာများ၊ စမတ် အာရုံခံ ကိ ရိ ယာ၊ Ultra-HD ဗီဒီယို ၊ စမတ် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှု နယ်ပယ်များတွင် တီထွင် ဆန်းသစ် မှု များ။ ၎င်းတို့အနက် နယ်ပယ် တစ်ခုစီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တိကျသော လိုအပ်ချက် များရှိသည်။
Industry Jul 07 ဇူလိုင် 7, 2021
ရှန်ဟိုင်း သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
ရှန်ဟိုင်း အာဏာပိုင်များက ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တည်ငြိမ် စေရန် ထိရောက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ တိုးချဲ့ ရန် မူဝါဒ ဆိုင်ရာ အစီအမံ များနှင့် ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုကို အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။